भिजिट नेपाल २०२० का सद्भावना दुत डोल्मा भन्छिन् : हाम्रो स्पीडसँग सबै हार्छन् - Vishwa News
विशेष अन्तर्वार्ता, न्यूयोर्क
मिसेस नेपाल टुरिजम् २०१९, को उपाधि धेरैको सपना थियो । श्रीमती छिरिङ्ग डोल्मा शेर्पाले आफ्नो प्रतिभा, सुन्दरता र क्षमतालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गरी निर्णायकको मन जित्न सफल भईन । दोलखाको ग्रामिण परिवेशमा हुर्किएर शिक्षा र समुन्नतीकोलागि राजधानी काठमाडौं छिरेका छिरिंग डोल्मा शेर्पाको जीवनगति सधैं प्रगती उन्मुख रहेको छ । परिवारको साथ आमा र गृहिणी, साथीभाईको सहृदयी अनि व्यवसायमा अब्बल रहने व्यवहारिक ज्ञान नै उनको सफलताका घोतक हुन् । यतिबेला उनै व्यक्तित्व “भिजिट नेपाल २०२०” को सदभावना दुतको रुपमा अमेरिका भ्रमणमा आएका छन् । यसै भ्रमणको उद्देश्य लगायत बिबिध बिषयमा जानकारी पाउनका हेतु विश्व सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाको लागि योगेश आदीले लिएको भेटवार्ता;
डोल्माजी अमेरिकामा स्वागत छ । कस्तो भईराको छ ?
– धन्यबाद । सोचेभन्दा राम्रो भईरहेको छ । मैले प्रवासमा रहेका नेपाली दाजूभाई दिदीबहिनीहरुको माया र सहयोगको गुन कहिले तिर्ने होला जस्तो लागिसक्यो । सबैजनाले कस्तो आफ्नै जस्तो व्यवहार गर्छन् ।
किन आउनु भो अमेरिका ? विशेष कारण छ कि घुमघाम मात्र ?
– दुबै भनेर बुझ्दा हुन्छ । नयाँ ठाउँमा पुग्दा कस्लाई घुम्न मन लाग्दैन र ? खासगरी यो पटक म नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको लागि सदभावना दुत भएर आएको कारणले गर्दा त्यसैको लागि बिभिन्न कृयिकलापहरु गर्दैछु । सबैले सकारात्मक लिएका छन् ।
बढी माया पाउनु भएको कारण तँपाईको नाम वा पदवी त होईन ?
– हैन होला । नेपालीहरु त्यतिसारो स्वार्थी कहिल्यै हुँदैन । हामी हुर्केको संस्कारले नै हामीलाई अपनत्व कायम राख्न सिकाएको हुन्छ । मैले अमेरिकाको मात्र कुरा गरेको होईन । थाईल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत आदि देशमा लामो समय बसेका नेपालीहरुले मेरो पदको नहुँदा पनि माया नै गर्थे ।
धेरै देश पुगिसक्नु भएछ । किन जानुभएको ?
– मेरो व्यवसाय र घुमघामको लागि गईरहन्थे । मेरो श्रीमानलाई पनि देशबिदेश डुल्न मनपर्ने अनि मलाई पनि । अरु के चाहियो र ? (हाँसो…)
के हो यो सद्भावना दुत ईत्यादि भनेको ?
– दुत ईत्यादि होईन । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन प्रबर्द्धनका हेतु नियुक्त गरेको – Visit Nepal 2020 को लागि सद्भावना दुत, भनेर मात्रै बुझ्दा हुन्छ । मैले जितेको मिसेस नेपाल टुरिजम् टाईटलको धेरै उद्देश्य मध्येको एउटा मुख्य उद्देश्य यो पनि हो । यसले नेपालको पर्यटन प्रवर्दनको लागि काम गर्दछ ।
के के गर्नु भयो त ? कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– बिस्तारै गर्दैछु । हुँदैछ । ‘छु मन्तर’ हुने कुरा होईन यो । मैले अहिले यो जिम्मेवारी लिएकोले मात्र होईन लामो समयदेखि नेपालको पर्यटनलाई विश्वसामु चिनाउँदै आएकी मान्छे हुँ । अहिले शुरुको दिन भएर होला, सम्मान भेटघाटले पनि अल्मल्याईराको छ । हुनत यस्तो काम भेटघाटबाटै शुरु हुन्छ ।
कसरी गर्ने हो ? तौर तरिका भन्न मिल्छ ?
– किन नमिल्नु, मज्जाले मिल्छ । हामीले पर्सपेक्टिभ प्लान बनाएका हुन्छौं । टार्गेट समुदाय र क्षेत्र हुन्छ । प्रोमोशनल प्याकेज हुन्छ । आर्ट, कल्चर, कस्ट्युम र फोटोग्राफीको एक्सपान्सन वे हुन्छन् । वान टु वान भिजिट्, मिडिया क्याम्पेन, डकुमेण्टरी सेमिनार… यस्तै अनेक छन् । ख्यालख्याल होईन यो । हेर्दै जानुस्, हाम्रो लक्ष्य मीट हुन्छ ।
गुड लक । अरु देशकाहरुले गरेको जस्तोपनि तरिका होलान् । मलाई पनि खुसी लागेको छ । अरुको आईडिया पनि लिने होला नि ?
– हामीले पनि अलिकति आफ्नो, अलिकति अरुको अनुशरण गर्ने हो । हामीसँग संसारलाई देखाउने चिज धेरै छन् । हामीले एकपटक स्पीड लिएपछि हाम्रो स्पीडसँग सबै हार्छन् । हामीले विश्वास जित्नु पर्नेछ । सबै चाँडै ठीक हुनेमा विश्वस्त छु ।
२०२० त आउनै लाग्यो त ! भ्याउनु हुन्छ त ?
– हामी पूर्ण तयार छौं । देश तयार छ । राजनैतिक स्थायीत्व छ । शान्तिसुरक्षा राम्रो बन्दैछ । अन्धकार हटेको छ । देखाउने कला, संस्कृती, झरना, हिमाल सबै छन् । प्रचारप्रसार तिब्र पार्दै छौं ।
यहाँका माथिल्लो तहको व्यक्तित्वहरुसँग पहुँच बनाउन र डिल गर्न आत्मविश्वास आउँछ ?
– म आफ्नो तर्फबाट कन्फिडेन्ट छु । नेपालमा हुने दर्जनौं सौन्दर्य प्रतियोगिताहरुमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिसकेको व्यक्ति हुँ । ममा त्यो क्षमता देखेर नै त मलाई सदभावना दुतमा नियुक्त गरेका होलान् नि ।
खासमा तँपाईको दायित्व चैं के हो ?
– नेपालको पर्यटन प्रबर्धन गर्दै समृद्ध नेपाल र व्यवस्थित पर्यटनका लागि कार्य गर्नुनै मरो पहिलो दायित्व हो । यसका लागि म तयार छु । गर्दैछु ।
समयको लागि धन्यबाद । हाम्रो शुभकामना छ ।
– धन्यबाद । मेरो बिचार राख्ने मौका दिनुभो । तपाईको पत्रिकालाई पनि शुभकामना ।
विमानस्थलबाट ८ किलो सुनसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ
पोखरामा कोरोना संक्रमित देखिएको हल्लाले बजार ततायो, के थियो वास्तविकता ?